Lasers aesthetic, igwe ịma mma, Ngwa Laser ahụike - Onye na-eweta
Igwe mgbochi ịka nká HIFU
Igwe Laser Fractional Co2
Cryolipolysis igwe ọnwụ arọ
Igwe na-ewepu ntutu diode Laser
Igwe ihe ọkpụkpụ nke EMSlim
Igwe Oxygen Oghere H2O2
Ogologo pulse 1064nm Nd Yag laser Machine
Igwe mara mma multifunction
Q gbanwere Nd Yag Laser Machine
Igwe na-ebuli RF
Sistemụ nyocha anụ ahụ
Ụlọ ọrụ KR LASER
IPL (ọkụ na-agba agba)
Ihe ngosi gara aga◀︎
Ihe mmịfe na-esote▶︎
Nnọọ na KR LASER
KR LASER raara onwe ya nye inye ngwọta otu nkwụsị na ịma mma ahụike maka ndị ahịa Salon, Hospital, Clinics. Anyị nwere 808nm Diode Laser Hair Removal Machines, Machines Coolsculpting, HIFU Machines, 980nm diode laser udide veins mwepụ igwe, Intense Pulsed Light (IPL) igwe maka gị.
Anyị nwere ngalaba nyocha & mmepe nke anyị, ndị otu azụmaahịa na-eto eto nwere arụmọrụ dị elu, ndị na-ekesa esenidụt na ngalaba azụmaahịa mgbe emechara.
A na-enwe ngwọta maka nsogbu gị mgbe niile!
Mwepụ igbu egbugbu
Mwepụ ntutuNa-ekpo ọkụ
Ihe otutu scars
Igwe Laser Picosecond bụ ihe ngwọta mara mma nke a pụrụ ịdabere na ya maka Choasma, Age spot, Nevus ...
Nweta ntinye okwu
Q gbanwere ND YAG Tattoo Iwepụ Laser Machine
Igwe na-ewepu Laser Q Switched ND YAG Tattoo bụ ezigbo ihe ngwọta mara mma nke a pụrụ ịdabere na ya maka Rem ...
Q gbanwere Nd YAG Tattoo na-ewepu Laser Machine
Usoro ọgwụgwọ na-anabata mmetụta mgbawa nke ọkụ, Super Picosecond Laser&......
1200W Diode ntutu na-ewepu laser Machine
Igwe na-ewepu ntutu isi nke 1200W Diode bụ ihe ngwọta mara mma nke a pụrụ ịdabere na ya maka ogologo oge h ...
Igwe na-ewepu ntutu isi diode
Theory Theory Diode laser akụrụngwa nakweere 808 nm, 755nm na 1064nm, karịsịa ......
Atọ n'ime Otu Multifunction Machine
Usoro ọgwụgwọ SHR: SHR ma ọ bụ Mwepụ ntutu isi bụ teknụzụ ọhụrụ ka ọhụrụ ......
Usoro ọgwụgwọ Multifunctional Workstation bụ nlekọta ihu zuru oke na nke ọma ......
Igwe Laser Fractional Co2 bụ ihe ngwọta mara mma nke a pụrụ ịdabere na ya maka imegharị akpụkpọ ahụ na res ...
6D Cryolipo Laser Sistemụ (Ngwaọrụ 6D Laser Slimming Nov-invasive)
The 6D Cryolipo Laser Shape System (Nov-invasive 6D Laser Slimming Equipment) bụ ahụike, ntụkwasị obi ...
High ike Electromagnetic Muscle ahu sculpting abụba ọkụ muscle ụlọ igwe
Theory Theory Coolsculpting & Muscle Training CoolSculpting a non-invas......
Portable 7D HIFU lekwasịrị anya Ultrasound Machine
The Portable 7D HIFU lekwasịrị anya Ultrasound Machine bụ ike, a pụrụ ịdabere na mma ngwọta maka ihu l ...
980nm Ịwa ahụ Diode Laser Machine
Igwe ịwa ahụ Diode Laser nke 980nm bụ ezigbo ihe ngwọta mara mma nke a pụrụ ịdabere na ya maka ọnya Vascular ...
Super Picosecond Nd YAG Laser igwe
The Super Picosecond Nd YAG Laser Machine bụ ahụike, ntụkwasị obi mma ngwọta maka Wepụ niile k ...
Nkwado ọrụ zuru oke
Anyị bịara ebe a iji nyere aka na ọkwa ọ bụla nke itolite omume gị.
Anyị na-enye OEM & ODM, ọzụzụ, nkwado teknụzụ, ma na-enye ọrụ nlekọta zuru oke.
Ụlọ ọrụ ozugbo. Amụma nkwado ọnụahịa kacha mma ga-eme ka ị nwekwuo ike.
Ndị otu nkwado teknụzụ 24/7 ga-adị njikere n'oge iji mee ka ngwọta ahụike zuru oke maka gị.
Anyị na-achọ mgbe niile maka mmekorita azụmahịa na ndị nnọchi anya n'ụwa niile. Anyị ji ezi obi na-akpọ gị òkù ka ị bụrụ otu n'ime ndị otu anyị na ezinụlọ KR LASER.
M na-achọ ka a gwọọ onye ọrịa ọ bụla na nlekọta kachasị mma, na maka ọgwụgwọ ọ bụla na-eme ka ọdịdị mara mma mara mma. Laser KR bụ usoro kachasị mma maka iwepụ egbugbu na-achọghị na ụdị akpụkpọ ahụ niile yana nchekwa na ịdị mma dị elu.
Anọ m na-enye iwepụ igbu egbugbu nwa oge ugbu a na Q-switched Nd:YAG, mana achọpụtara na mmụba nke ndị ọrịa nwere egbugbu mara mma. Achọrọ m ịhụ na enyere ndị ọrịa m nsonaazụ kacha mma, n'agbanyeghị agba ink ha gosipụtara, nke mere m ji họrọ ịgbakwunye laser KR na omume m. Anyị ahụla nzaghachi dị egwu na ink ndị na-atụgharị uche.
Dọkịta ịchọ mma
Ebumnobi anyị bụ ime ọgwụgwọ na-arụpụta nsonaazụ kacha mma maka ndị ọrịa anyị niile. KR Laser enyerela ọtụtụ ndị ọrịa anyị aka ịhụ nsonaazụ dị egwu, anyị nwekwara obi ụtọ na anyị ahọrọla teknụzụ kacha egbu egbu maka ọgwụgwọ igbu egbugbu anyị niile.
KR LASER e hiwere na 2008. Ụlọ ọrụ a dị na Beijing, China. Ọ bụ ọkachamara na-emepụta ngwa ngwa. Anyị tumadi na-elekwasị anya na imewe na mmepụta nke ọgwụ laser mma akụrụngwa.
Njikọ ndị ama ama
Ụlọ nke 2, No.1 Yard, No.2 Street, Wuliqiao, Chaoyang District, Beijing, China
Nwebiisinka © 2008-2022, Ikike niile echekwabara.
Webụsaịtị a na-eji kuki iji kwalite ahụmịhe nchọgharị gị yana nyere aka na ahịa anyị.
Ị nwere ike ịgụkwu gbasara iwepụ kuki ebe a: amụma nzuzo
Ekwenyere m na iwu nzuzo a
Nweta Quote ngwa ngwa
Ihe ndị akara * chọrọ
Ee, ọ kaara gị mma mejupụta nke a, achọrọ ya. Ee, ọ kaara gị mma mejupụta nke a, achọrọ ya. Ee, ọ kaara gị mma mejupụta nke a, achọrọ ya.
Ee, ọ kaara gị mma mejupụta nke a, achọrọ ya.